Unobva London pamwe Amsterdam, Avignon, kweBrussels, diki, Lyon, Marseille, Paris uye reRotterdam, Eurostar zvimwe ndiyo mukurumbira mukuru-nokukurumidza njanji webasa Europe. wo, Getlink yoga anoshanda uye muridzi zvitima. Ivo kuyambuka ari Channel Tunnel pakati United Kingdom uye France. Kupererwa pamusoro richikurukura soro-nokukurumidza mitsetse, Eurostar anodzidzisa count-eighteen motokari Class 373/1 nezvitima gumi-motokari Class uye 374 nezvitima. Dzinomhanya kusvikira 186 mph (300 makiromita paawa). Uyezve, Eurostar anotakura zvakawanda vanhu kupfuura vendege zvose zvabatanidzwa. Izvi kuita Eurostar chikuru yokudadira opareta pamusoro nzira kuti unoshanda.
The dzakawanda TGV kumabvazuva newe kune muFrankfurt uye Munich. Saizvozvowo, yenyu rwezasi nzendo achatora iwe zvakananga kuMilan muItaly kana Barcelona kuSpain. Usaite mhosho yekufamba, TGV ndeimwe yenzvimbo rokunyaradza muchinjikwa muganhu nezvitima! Uyezve, zvichakutorera kuti kupfuura anoshamisa kudanana rwendo kubva Paris kusvika pamhenderekedzo Mediterranean. kana, kune Vakamupfekedza Bordeaux, Lyon uye Marseille uye nyika yakakurumbira Cannes. saka, kana uchida kusvika France uye / kana Switzerland nechitima, unogona kuita kuti akakwira muchinjikwa muganhu nezvitima wakashanda kubudikidza TGV Lyria.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcross-border-trains-europe%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)